ဒေါက်တာ ဦးတူးဂျာ ဦးဆောင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီလည်း တည်ထောင်ခွင့်ရပြီ | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
ဒေါက်တာ ဦးတူးဂျာ ဦးဆောင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီလည်း တည်ထောင်ခွင့်ရပြီ
Posted by shannnews at 8:22:00 AM0comments
ဓာတ်ပုံ ကေအိုင်အိုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က ဒေါက်တာ ဦးတူးဂျာ
ဒေါက်တာဦးတူးဂျာ ဦးဆောင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ လည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ ဒီကနေ့မှာ တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
“ ဒီကနေ့ပဲ ဖက်စ်နဲ့ အကြောင်းကြားလာတာပါ။ လောလောဆယ်တော့ မနက်ဖြန်တစ်ဘက်ခါမှာ ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ အစည်းဝေးလုပ်ပြီးတော့ ပခေါင်းဆောင် ဒုခေါင်းဆောင်ရွေးပြီး အလံတို့ အမှတ်တံဆိပ်တို့ ကိုနေပြည်တော်မှာတင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ” ဟုဒေါက်တာဦးတူး၈ျာကဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာဦးတူးဂျာဟာ ယခင်က ကေအိုင်အို ဒုဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် ပါတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမယ့်ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့ပါဘူး။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း မိုကောင်းမြို့နယ်ကနေ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အနေနဲ့ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးပေမယ့် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ မိုးကောင်းမြို့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်း ပခဲ့တဲကအတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိူင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲ ပါတီထပ်မံတည်ထောင်ရန်လျှောက် ထားခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂ ရက်နေ့က ကချင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီ ၊ လီဆူ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ နှင့် ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီဆိုပြီး ကချင်မျိုးနွယ်စု ၀င်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ပါတီ သုံးခုရှိနေပါပြီ။
မန္တလေး သမိုင်းဝင် ရွှေကျောင်း ထိန်းသိမ်းရေး အမေရိကန် ကမ်းလှမ်း
မန္တလေး ရွှေနန်းတော်ကျောင်း (ဓာတ်ပုံ – bugbog.com) သက်တမ်း ၁၃၇ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော မန္တလေးတောင်ခြေရှိ သမိုင်းဝင် ရွှေကျောင်းကြီးြ...
အမေရိကန်ကို မြောက်ကိုရီယားက ဒုံးကျည်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်
မြောက်ကိုရီယားနိုင်ငံက သူတို့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကုန်းတွင်းပိုင်းအထိ ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ဒုံးကျဉ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လ...
ဝက်သချဉ် ။ဂျူးမြစ်နိုင်နိုင်နဲ. ငရုတ်သီးကြော်လေးရောထည့်ပေးထားတယ်။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်နဲ. ကောင်းမှကောင်း။း)
ကမ္ဘာ မြေကြီးအား ခြိမ်းခြောက်နိုင်ဖွယ် ရှိသည့် ဂြိုဟ်မွှားများကို ဖျက်ဆီးနိုင်မည့် ဒုံးပျံတစ်စင်း ရုရှား တည်ဆောက်မည်
အောက်တိုဘာ(၂၁) ရုရှား နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ မြေကြီးအား ခြိမ်းခြောက်နိုင်ဖွယ် ရှိသော ဂြိုဟ်မွှားများကို တိုက်ဖျက် နိုင်စွမ်း ရှိမည့် ဒုံးပျံ...